ခပ်ဖျော့ဖျော့ မီးရောင်အောက်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် လမ်းသလားလို့နေမိတယ်။ ဒီလျှောက်လမ်း ကျဉ်းလေးထဲမှာ လျှောက်နေမိတာ ဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ဆို သုံးခေါက်မြောက်လားမသိ။။
မီးရောင်မှိန်မှိန် ပတ်လမ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ကျွန်တော်လိုပဲ လူတစ်ချို့ လမ်းသလားနေတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ ပတ်လမ်းကျဉ်းလေးဘေးက အခန်းနံရံကို မှီရင်း နေနေကြတယ်။ အားလုံးဟာ ...အတွင်းခံ ဘောင်ဘီလေးတွေနဲ့ ပေါ့။ ဒီနေ့ဟာ သောကြာနေ့လေ။ ပြီးတော့ ခြင်္သေ့ကျွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ စင်ကာပူရဲ့ public holiday နေ့ပါ။ ဒီရေချိုးခန်း(sauna) ရဲ့ ထုံးစံအရ သောကြာနေ့ဆို underware နေ့ပေါ့။ ပြိးတော့ အသက် ၂၄နှစ်အောက် တွေအတွက် K-boy လို့ သတ်မှတ်ပီး ဝင်ကြေး အခမဲ့ရက်တွေထဲက တစ်ရက်။ပတ်လမ်းကျဉ်းလေးရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အခန်လေးတွေ အစီစီ ရှိတယ်။
အခန်းလေးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အဆင်ပြေအောင် ဂျယ်ရယ်၊ ကွန်ဒုံးလေးတွေရယ်၊ တစ်ရှုးပေပါလေးတွေက အဆင်သင့်ပဲ။ အခန်းထဲမှာတော့ တူတူအိပ်ဖို့ မွေယာခပ်ထူထူကို leather အိပ်ယာခင်း အနီရောင်နဲ့ပါ။ နံရံကပ်မှန်ကြီးကလည်း ခန်းလုံးပြည့်နီးပါး။ မီးအလင်း အမှောင်ကို စိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိဖို့..မီးခလုတ်လေးက တံခါးဘေးတစ်ဖက်မှာ။ ပတ်လမ်းလေးကို ဝင်္ဂဘာဆန်ဆန် အကွေ့အကောက်လေးတွေနဲ့ မီးရောင်မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားတယ်။ တစ်ချို့ဒေါင့်ချိုးလေးတွေမှာ အပြင်ဘက်က လူတွေကို မေ့ပီး နှစ်ယောက် တစ်တွဲ ၊ သုံးယောက် တစ်တွဲ အနမ်းမိုးတွေ ခြွေ၊အချစ်အားတွေ ပြိုင် နေကြတယ်။ရတာမလို လိုတာမရ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဟာ အမှန်ပဲလား။ ကျတော့နားကို ချဉ်းကပ်လာတဲ့ သူတွေကို အသာငြင်းဆန်းရင်း ကျတော်စိတ်ကြိုက်ကို ရှာနေမိတယ်။
သုံးခေါက်မြောက်လာပီဆိုတော့ စိတ်ကြိုက်လည်းမတွေ့တာနဲ့ အပြင်ပြန်ထွက်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကော။ စိတ်ကြိုက်တွေ့လို့ အခန်းထဲဝင်သွားပီလား။ ဒါမှမဟုတ် အပြင်ဘက် မှာ TV ပဲကြည့်နေသလား။ လျှောက်လမ်းတွေ အခန်းတွေရှိတဲ့ နေရာထက် အပြင်ဘက် lobby က အလင်းရောင် အနည်းငယ်ပိုတယ်လေ။ ကျွန်တော် အပြင်ကို ထွက်လာမိတယ်။ အော် ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းက အပြင်ရောက်နေနှင့်ပြီ။ သူက ကွန်ပျူတာသုံးနေတာပဲ။ အပြင်ဘက် မှာ TV ခန်းနဲ့ တွဲလျက် အင်တာနက်သုံးနိုင်အောင် ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးက အဆင်သင့်လေ။ ကျွန်တော့ သယ်ရင်းက msn သုံးရင်း သူ့ ချစ်ချစ်နဲ့ ချက်နေတာ။ ကျွန်တော်က ပုခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြရင်း စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြောင်းကို “အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ.. စိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးဗျ.. အသက်ကြီးတွေများသလားလို့” ပြောရင်း တစ်ဖက်ကို လှည့်ကြည့်မိတယ်။ ဟင်..။ ကျတော့ မျက်လုံးတွေဟာ အရောက်လက်သွားသလား။ နှုတ်ခမ်းတွေ ပြုံးသွားသလားဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သာ သိလောက်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကို အခုတော့ တွေ့ပီ။ သူလေးဟာ ကျွန်တော်ထက် အရပ် ၂လက်မလောက်ပိုရှည်မလားပဲ။ နှုတ်ခမ်းမွှေး သဲ့သဲ့လေးနဲ့ ..။ ပြောမယ်ဆို မင်းသား ရဲတိုက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဘော်ဒီကတော့ ရဲတိုက်လောက်မဝဘူး။ ပိန်သွယ်သွယ်လေးလေ။
ကျွန်တော့ သယ်ရင်းကို တစ်လက်စတည်း မျက်စပစ်ပြတော့ “အင်း..ဟုတ်တယ် သဘောကျတယ် ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ပြန်ပြုံးပြတယ်”..။ “ဘယ်လိုလဲ ကိုမောင်.. ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလိုက်ရမလား”လို့မေးတော့ “အင်း မိုက်တယ်ကွ.. လှုပ်ရှားလိုက်လေ”လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ကိုမောင်ကော ဝင်မှာလားလို့မေးတော့ “အဆင်ပြေရင်ပေါ့လို့” သူက ပြန်ဖြေတယ်။ ကျွန်တော်ကော ကိုမောင်ကောက top သမားတွေ ဖြစ်ပီး ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမောင်က တဖက်လူ အဆင်ပြေရင် threesome (သုံးယောက်တူတူလုပ်ခြင်း) လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော် သူဘက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ သတင်းစာဖက်ဖို့ စာကြည့်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေပါပီ။ ကျွန်တော်က သူ့ကို အဓိပါယ် ပါတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်တယ်။ ပီးတော့ လိုက်ခဲ့ဖို့ အချက်ပေးလိုက်ရင်း ကျွန်တော် အတွင်းခန်းထဲကို အသာဝင်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက အနောက်ကနေ လိုက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ အိုကေ ဒါဆို အဆင်ပြေပီပေါ့..။ ကျွန်တော် အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ရင်း သူအနားကို ကပ်သွားလိုက်တယ်။ ပီးတော့ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လေ..
“hi friend…. How r u?”
“hi.. Are you Filipino”
“no.. I am Myanmar”
“Can we make fun.. ok?”
သူက အသာခေါင်းငြိမ့်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျတော်တို့ အခန်းလွတ်တစ်ခုကို အမြန်ဆုံးရှာလိုက်တယ်။ အော် တွေ့ပါပီ အခန်းလွတ်..တစ်ခန်း။ သူက အခန်းထဲကို ဝင်မလို့လုပ်တယ်။ ကျွန်တော့် နောက်ဖက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက် ကိုမောင်က ကျွန်တော်ဘေးရောက်နေပါပီ ။ ဒါနဲ့ သူ့ဘက်ကို လှည့်ပိး သူလက်မောင်းကို အသာပုတ်ကာ
“ This is my friend, maung”.ဆိုပီး ကိုမောင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်...
ပီးတော့“Can we make fun together?” ဆိုပီး သူ့သဘောကို မေးတော့ သူက သဘောတူစွာ ခေါင်းငြိမ့်ရင်း အခန်းထဲကို ဝင်လာခဲ့တယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ကွန်ဒုံးက ကုန်နေပီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အပြင်ခဏ ထွက်၊ တခြားအခန်းထဲမှာ ကွန်ဒုံးသွားယူလိုက်ကာ အခန်းဆီပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်၊ ကိုမောင် နဲ့ သူတို့ အတွင်းခံတွေကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုမောင်က တစ်ရှုးတွေ ထုတ်ကာ ကုတင်ကို သုတ်လိုက်တယ်။ ရှေ့လူတွေ ဘယ်လို လုပ်သွားလဲမသိဘူးလေ။ အနည်းဆုံးတော့ သန့်သွားတာပေါ့။ ပီးတော့ ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်း၊ ကိုမောင်က ညာဘက်ခြမ်း မှာ နေရာယူရင်း မတ်တက်ရပ် ပွတ်သပ်လိုက်တယ်။ သူရဲ့ နို့သီးခေါင်းရဲရဲလေးတွေကို ကိုဇော်က ငုံခဲလိုက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ဆီက ညီးတွားသံ သဲ့သဲ့လေးထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်က သူရဲ့ရင်အုံလေကို အသာကလေး လက်နဲ့ ကလိပေးလိုက်တယ်။
ခဏနေတော့ သူလဲ ဖီးတက်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူကို ကုတင်ပေါ် လှဲအိပ်စေလိုက်တယ်။ ကျတော်က သူနို့အုံလေးကို ငုံစို့နေချိန်မှာ ကိုမောင်က သူ့ရဲ့ ခရေပွင့်ကလေးကို လက်ကလေးတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နေပါတော့တယ်။
‘အိုး.. အား ..အီး… “ သူရဲ့ ဖီးလ်တက်သံတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။
ကိုမောင်က ဂျယ်ရယ်၊ ကွန်ဒုံးရယ် လှမ်းယူလိုက်တာကို ကျွန်တော်ဟာ သူနှုတ်ခမ်းလေးတွေ တမက်ရှိုက်ရှိုက်နမ်းနေရင်း လှမ်းတွေလိုက်တယ်။ ပီးတော့ ကိုမောင်က သူ့ရဲ့ ခရေပွင့်လေးတစ်ဝိုက်ကို ဂျယ်လေးတွေလိမ်းပေးရင်း ကွန်းဒုံးကို စွပ်လိုက်ကာ အသင့်နေရာယူလိုက်တယ်။
ကိုမောင်ဟာ ဂိုးသမားနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပီလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ဆီက ကွန်ဒုံးသုံး ဖို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်..
”Please use condom”
အဲဒီတော့ ကိုမောင်က “sure” လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ သူက ကိုမောင်ရဲ့ ညီဖွားကို လက်နဲ့ စမ်းရင်း ကွန်းဒုံး သုံးမသုံး စစ်နေသေးတယ်။ ကိုမောင်ဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးပီ ပီ သူ့ရဲ့ ခရေပွင့်လေးထဲကို အသာထိုးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူ့ဆီက ညီးတွားသံ ဖီလ်တက်သံလေးတွေဟာ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်က တော့ သူအဆင်ပြေစေဖို့ သူ့ရဲ့ နို့သီးလေးကို တလှည့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို တစ်လှည့်စီ ငုံဆို့ပေးနေခဲ့တယ်။
တစ်ချက်ပီး တစ်ချက် စီးချက်မှန်မှန် သွင်းရင်း ကိုမောင်ဟာ ရှေ့တိုး နောက်ငင်း ပြုလုပ်ပေးနေပါတော့တယ်။သူ့ဆီက “အား… အီး .. ဂွတ်…ဂွတ်….” ညီညူသံတွေဟာ တဖြည်းဖြည်ကျယ်လောင်လို့နေပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်း အရှိန်ရလာပီးမို့ ဆောင့်ချက်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းလို့လာပါတော့တယ်။
ကိုမောင့်ဆောင့်ချက်များဟာ ပြင်းထန်လာသလို သူ့ဆီက ဖီလ်တက်ပီး အော်သံများဟာ ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားတဲ့ Lady Gaga သီချင်းသံနဲ့ အပြိုင် ထွက်ပေါ်လာလို့နေပါတယ်။ အချက် ၃၀၊ ၄၀လောက် ဆောင့်ပြီးချိန်မှာ ကိုမောင်ဟာ သူ့ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ပခုံးပေါ်တင်ကာ ပုံစတစ်မျိုးပြောင်းပေးကာ ဆက်လက် သွင်းနေပါတယ်။
မကြာပါဘူး ကိုမောင့် ဆောင့်ချက်တွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာကာ မကြာမီ အထွက် အထိပ်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ကိုမောင် ပြီးသွားပီဆိုတော့ ကျွန်တော့် အလှည့်ရောက်လာပါပြီ။ ကိုမောင်ဟာ တစ်ရှုးယူပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်ကို အသာလှဲချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကွိုင်ကို အသာလှမ်းယူရင်း ကျွန်တော့ ညီငယ်မှာ အသာစွပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကို ကိုမောင်က
လို့ လှမ်းပြောပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကျတော် ဂျယ် အများကြီးလိမ်းတာကို မကြိုက်ဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် “ဟင့်အင်း ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်မယ်” လို့ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အသာကားကာ နေရာယူလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခရေပွင့်လေးနားကို အသာကပ်သွားပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ ညီဘွားကို သူ့ခရေပွင့်လေးထဲ အသာထိုးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူဆီက ဖီတက်သံလား ညီညူသံလား မသိ ထွက်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သူခြေထောက်လေးကို ကွေးပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုမောင်က ပါးစပ်ကနေ သူ့နို့အုံလေးကို စို့ပေးနေပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း သူ့ရဲ့ ညီးဘွားကို လက်ကလေးနဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတော့တယ်။
ခနနေတော့ ကျွန်တော်ဟာ ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပီး သူ့ကို လုပ်ပေးးပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျတော် အချက် ၃၀ကျော်လောက် ဆက်လက်လုပ်နေပါတော့။ မကြာပါဘူး ကျွန်တော် လုပ်ပေးတာကြောင့်ကော ကိုမောင့်ရဲ့ လက်နဲ့ လှုပ်ပေးမှုကြောင့်ကော သူဟာ ဖီးလ်တက်ကာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ သူ့ပီးသွားပီး ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အချိန်မဆွဲနေတော့ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အချက်၂၀ကျော် လောက် စောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်လဲ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ပီးသွားတော့ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်ပီး တစ်ရှုးနဲ့ ညီဘွားကို သုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်း တစ်ရှုလှမ်းယူကာ သူ့ကို သုတ်ပေးနေပါတယ်။ သူဟာတော်တော် ကောင်းသွားတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ သူ့သုတ်ရည်တွေဟာ အရမ်းကို ပန်းထွက်ကာ ကိုမောင်ကျောကုန်းတွေ လက်တွေကို စင်ကုန်ပါတယ်။
တစ်ရှုးနဲ့ သန့်စင်ရေးလုပ်ပီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ အတူအိပ်ရင်း စကားစမြည် ပြောကြပါတယ်။ သူ စင်ကာပူကို ရောက်တာ ၂နှစ်ရှိပြီတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းတွေ သူ့ကို ပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာသူက ကျွန်တော့်ကို သူ့လိုပဲ ဖိလစ်ပိုင်တစ်ယောက်လို့ ထင်လို့တဲ့။ သူကကျွန်တော်ကို မြင်တော့ သူတို့ တစ်နိုင်ငံထဲ ဖိလစ်ပိုင်သားတစ်ယောက်နဲ့ စင်ကာပူမှာ အတူအိပ်ရပီ ဆိုပီး ဝင်လာတာတဲ့ဗျာ။ နောက်တော့မှ ကျွန်တော် မြန်မာမှန်းသိတာတဲ့။ ဒီတော့ ကျတော်က
“ဟာ ဒါဆို ငါ ဖိလစ်ပိုင် စကားပြော လေ့လာထားရမှာပေါ့ ဟုတ်လား” လို့ နောက်တော့
“အင်း မင်းလေ့လာထားတော့ ဖိလစ်ပိုင်တွေနဲ့ အတူအိပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့တဲ့ဗျ” ။
နောက်ပြီး သူက ကိုမောင်ဖက်လှည်ကာ
“how old are you?” လို့မေးပါတယ်။ ကိုမောင်က “26” လို့ဖြေတော့ ကျွန်တော်ကို မေးပါတယ် “over 25 “ လို့ဖြေတော့ သူက
“ Oh! You two are My Ko Ko”
“ဟိုက်” ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ကော ကိုမောင် ပါကြောင်သွားတယ်ဗျာ.. တယ်လာတဲ့ ဖားလေး(ဖိလစ်ပိုင်) လေးပါလား။
ကျွန်တော်ကလည်း ဖိလစ်ပိုင် ဂေးဇာတ်လမ်းတွေ ငါ့မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတာ တွေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ငါ အကြိုက်ဆုံးကတော့ “the masseur” ကိုကြိုက်ကြောင်းပြောတော့ ဟုတ်လား သူလဲ အဲဒိဇာတ်လမ်းကို ကြိုက်တယ်တဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့တွေ စကားတွေ တော်တော်များများပြောဖြစ်ပြီး အမောပြေတော့ေ၇ချိုးရအောင် အပြင်ဘက်ကို ထွက်ကာ ရေချိုးကြပါတယ်။
ရေချိုးပီးတော့ အပြင်ဘက်ထိုင်ခုံမှာ ကိုမောင်နဲ့ သူက စကားကောင်းနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့တို့နဲ့ ခဏ စကားပြောပြီး အတွင်းခန်းထဲကို ဝင်လာကာ စိတ်ကြိုက် နောက်တစ်ယောက်များ ရမလားလို့ ရှာဖွေနေပါသေးတယ်။
နောက်နာရီ ဝက်လောက် ကြာတော့ ကျွန်တော် အပြင်ထွက်လာချိန်မှာ ကိုမောင်နဲ့ သူ စကားပြောနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုမောင်ကို အပြန်နောက်ကျနေမယ် ပြန်၇အောင်လေလို့ ပြောကာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။
ပြန်ခါနီးမှာ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ပွေ့ဖက် နှုတ်ဆက်ကာ နောက်တစ်ပတ် သောကြာနေ့ထက်တွေ့မယ်လို့ ချိန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သူလေးရဲ့ နာမည် “Mark” လို့ခေါ်ပြီး Dover MRT နားက Singapore Poly မှာ ---- ရာထူးနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲတိုက်နဲ့ ဆင်တူပြီး ချောမောလှတဲ့ Filipino တစ်ယောက်နဲ့ ထပ်မံတွေဆုံဖို့ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမောင်တို့ နှစ်ယောက် ဒီတစ်ပတ်လည်း
key box sauna ကို ရောက်ဖြစ်အုံးမယ် ထင်ပါတယ်။
53 Ubi Avenue 1,
#05-32 Paya Ubi Industrial Park
Tel : 6744-3218 and Fax: 6744-0110
Posted by bbb at Saturday, June 05, 2010 26 comments Links to this post
ပူလောင်တဲ့ နွေည တစ်ခုမှ ရေးခဲ့မိတဲ့ ကွန်မက် comment တစ်ခုက အစပြုခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒိတ်တင်းဆိုဒ်တစ်ခုရဲ့ သူစာမျက်နှာအောက်က ပုံလေးမှာ ချခဲ့မိတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကွန်မက်လေးနောက်ကနေ လိုက်လာခဲ့တဲ့ သူရဲ့ အစပျိုးစကားတွေလေ။ အဲဒီညမှာ ကောင်ကင်မှာ နေမင်းကြီးမလင်းတော့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နေ့ နဲ့ ည တွေမှားခဲ့တယ် ဆိုမလားဟင်။ သူနဲ့ ကျတော်ရဲ့ ချက်တင်တွေဟာ ပြောမဆုံးနိုင်နဲ့ ပျော်မြူးနေခဲ့မိတယ်လေ။ သူဟာ စကားပြောကောင်းသူ တစ်ယောက်လား ကျတော်ကပဲ စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်လား။ ဘာပဲပြောပြော သူနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ gtalk ထဲမှာ စကားလုံးတွေဟာ မြူးတူးနေတယ် ဆိုတာကတော့ Larry Page နဲ့ Sergey Brin တို့တောင် သိလိုက်မယ် မထင်ဘူး။
နောက်တစ်ပတ် ရုံးပိတ်ရက်စနေနေ့မှာ သူကို ကျတော်နေတဲ့ အခန်းလေးဆီ အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီစနေနေ့ မနက်စောစောဟာ အနည်းငယ်ပူလောင်နေပေမဲ့ ကျတော်ရင်ထဲက နှလုံးသားလေးဟာ ဆူပွတ်နေတယ်ဆိုတာ တက်မက်ခြင်းဆိုတဲ့ အပူငွေ့တွေကြောင့်လား။ သူကိုသွားကြိုတဲ့ MRT Station လေးရောက်တော့ သူရဲ့ ချစ်စရာမျက်ဝန်းလေးမှာ စူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့ပေါ့။ “ကျတော် ဒီဘက်ကို အခုမှ ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာဗျ“လို့ ပြောခဲ့တဲ့ သူနှုတ်ခမ်းလေးဟာ ရဲရဲနီနေတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ချိုသက်ခြင်း ခါးသီးခြင်း ကြမ်းတမ်းခြင်း နူးညံခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ သူဟာ ကျတော်ရဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ညနေအထိ သာမန် မိတ်ဆွေတွေ အနေနဲ့ အတူရှိနေတယ်။ သူကော ကျွန်တော်ကော “ဂျူးရဲ့ အမှတ်တရ” ဝထ္တုအကြောင်းကို စကားမစခဲ့မိဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ သိရတာက သူဟာ ဂျူးခရေစီတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့..။
ညနေခင်းသူ ပြန်မယ်ဆိုတော့ လမ်းမီးတွေလင်းနေပီလေ။ သူအပြန်ကို ကျတော် MRT station အထိ မလိုက်ပို့ခဲ့ပေမဲ့ သူဆီက မက်စေ့လေ့တစ်စောင်ဟာ လေလှိုင်းကြားက တဆင့်ကျတော် ဖုန်းကလေးထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ “အစ်ကို့ကို ချစ်တယ်” တဲ့။ ကျတော်ပျော်ရမှာလား ဝမ်းနည်းရမှာလား။ လိုချင်တာ တစ်ခုကို ရမိတဲ့ သူအတွက် ပျော်စရာကောင်းပေမဲ့ အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ ထာဝရမတည်မြဲမှာကို ကျတော်တွေးကြောက်နေမိတယ်။
ညစဉ်ညတိုင်း gtalk ချက်တင်တွေထဲမှာ ကျတော်ကော သူကော ညဘက်အချိန်အတော်ကြာကြာ အထိရှိနေခဲ့တယ်။ သူအများဆုံးကျတော့်ကို ပြောတာကတော့ “ကို့ ကို ကျွန်တော် ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေပဲ။ သူကို ပြန်ချစ်သင့်သလား။ အချစ်တစ်ခုဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်တည်နိုင်သလား။ သူ ကျွန်တော်ကို ချစ်တာ ခနတာလား။ ထာဝရလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေရဲ ချစ်ခြင်းဟာ ကြာရှည် မတည်မြဲဘူးဆိုပေမဲ့ ခနတာနဲ့တော့ ပြတ်တောက်သွားမှာကို မလိုလားဘူးလေ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပြားဟောင်းလေးကို ဖွင်လျှက်ပေါ့။
သူနဲ့ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် ဆုံကြတာကတော့ Starbuck ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာပေါ့။ ညနေခင်းရဲ့ရွှေညိုရောင် ကောင်ကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ရင်း ကော်ဖီခွက်လေးကိုသောက်ကာ “အစ်ကိုတိုက်တဲ့ ကော်ဖီခွက်လေးမှာ ချစ်ခြင်းတွေပါတယ်ဗျနော်”တဲ့။ အဲဒီလောက်တောင်ပဲလား ကလေးရေ။ merlion နားက starbuck ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ သူအတွက် လိုချင်တဲ့ အဖြေကို ကျတော်ဟာ တော်တော်ကြီး စဉ်းစားပီးမှ ပေးခဲ့တယ်။ ”ခနတာ အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်၊ တစ်ဘဝစာ အတွက်ပါလို့” ပြောခဲ့တဲ့ ကျတော်စကားကို Merlion ကြီးကြားလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီညက ကောင်ကင်းကြီးမှာ ကြယ်တွေလင်းလက်နေသလား ဆိုတာ ကျတော်မသိခဲ့ပေမဲ့ ကျတော် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ကြယ်လေးတစ်ပွင့် လင်းလက်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ သူရဲ့ အလုပ်ချိန်ဇယားအရ ပိတ်ရက်တွေမှာပါ အလုပ်လုပ်ရတာမို့ သူနဲ့ ကျတော်တွေ့ဆုံချိန်တွေ အနည်းငယ်ကျဲပါးခဲ့တယ်။
မေလရဲ့ နွေနှောင်းရက်တစ်ခုမှာ ကျတော်အလွတ်ရနေတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုကို နှိပ်ကာ သူ့အသံကို နားစွင့်နေခဲ့မိတယ်။ ကျတော်ပြန်ကြားမိတာကတော့ ကျတော်မယဉ်ပါတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့အသံပဲ။ အဲဒီအသံပိုင်ရှင် ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲတဲ့။ ဟင်...။ ကျွန်တော်ကလည်း ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ်. ကျွန်တော်ရဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးကောလို့ ဆက်တိုက်မေးလိုက်မိတယ်။ အသံရှင်က ကြယ်ပွင့်လေးရဲ သူငယ်ချင်းပါတဲ့။ ဒါဆို ကျွန်တော်ကို ဘယ်သူလဲလေး ဘာကြောင့်မေးတော့ သူက ကြယ်ပွင့်လေးနဲ့ ရိုးရိုးသားသား သူငယ်ချင်းပါတဲ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့ ဒေါသတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဖက်စွန်ရောက်နေပီမို့ ကျတော်သူကို ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ ဆိုတာတောင် မမှတ်မိတော့သလောက်ပဲ။
ညဘက်ရောက်တော့ ကြယ်ပွင့်လေးဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။ မနက်ဖြန် National library နားမှာ တွေမယ်တဲ့။ National Library ဘေးနားမှာ ကျွန်တော်ဟာ အချိန်အတော်ကြာထိအောင် သူကို စောင့်နေခဲ့မိတယ်။ အသံတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ကျတော်ရဲ့ ဖုန်းလေးကို ပဲ အခါခါကြည့်နေခဲ့မိတယ်လေ။ ဖုန်းလာနိုး လာနိုးမျှော်နေမိပေမဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဖုန်းလေးကိုပဲ ကျွန်တော်ဟာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ငေးမောနေမိတယ်လေ။ နောက်မှသိရတာက သူဟာသူ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ အိပ်ပျော်သွားလို့ပါတဲ့။
အဲဒီနေ့ကစပီး ကျွန်တော်ရဲ့ ဖုန်းကလေး အသံတိတ်နေခဲ့တာဟာ ရက်တွေကြာခဲ့ပီပေါ့။ ခနတာ ချစ်ခဲတာမဟုတ် တစ်ဘဝစာ ရင်းပြီးချစ်ခဲ့သူမို့ သူပြန်လာမဲ့ရက်ကို မျှော်နေမိတာက ကိုယ်အပြစ် မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
Posted by puluque at Sunday, April 25, 2010 8 comments Links to this post
dateSun, Apr 18, 2010 at 7:41 PM
subjectChat with eragonboyy@gmail.com
hide details Apr 18 (1 day ago)
7:22 PM eragonboyy: ဟိုင်း
7:23 PM eragonboyy: ဘယ်ကချက်နေတာလဲ
7:24 PM မကြွားပါဘူး
7:25 PM can buy anybody
me: but it is not so cheap and so expensive
7:26 PM eragonboyy: ပုံပြ
7:27 PM me: brother လဲပြလေ
7:28 PM www.nyinaylinn.multiply.com မှာကြည်.နိုင်တယ်
7:29 PM i m so ugly
7:30 PM eragonboyy: အစ်ကိုက
7:31 PM me: မချွန်ပါဘူးဗျာ
ခပ်တုံးတုံး ခပ်အအ ခပ်နန ကောင်ပါ
7:32 PM me: အိုကေ ညီ
7:35 PM eragonboyy: အစ်ကို
အိမ်က လာလို့ ခနနေတာ
7:41 PM eragonboyy: အစ်ကို
Posted by puluque at Thursday, April 22, 20106comments Links to this post
dateTue, Apr 13, 2010 at 11:57 PM
subjectChat with twinstar999@gmail.com
hide details Apr 13 (6 days ago)
11:45 PM me: Inn
me: What happen
me: In here dont have thingyan
11:46 PM ညီ.ကိုလေးက
11:47 PM ဂုဏ်ယူပါလား
me: Hote tel
me: Bar ko gonee u tar le
11:48 PM I m poor guy
me: R u at home or at cafe
11:49 PM ဆိုင်မှာလေ
me: Sar sa yar ma shi lot
me: Inn give me
me: Closed ready
11:50 PM twinstar999: စိတ်ပျော်အောင်
me: U mel
11:51 PM ယူပြီူးရင်ပြန်ပေးရတတ်တာကို
me: Arr bwer
me: What u want
11:52 PM me: What
me: Ok i receive
11:53 PM twinstar999: ဟုတ်ကဲ.ပါ
11:54 PM ညီ.ချစ်ကိုလေးဆီက
me: Bar pay ya mar le
11:55 PM What
11:56 PM me: Hote
11:57 PM K baby i have to sleep
11:58 PM twinstar999: ဟိဟိ
me: Tomr i have to go job
me: Hlu soe
twinstar999: sweet dreammmmmmmmm
me: Haveanice dream
11:59 PM twinstar999: အရာ2ကိုပျော်ရွင်အဆင်ပြေပါစေ
me: Sleep well
twinstar999: ssee uuuuu
12:00 AM me: Byeeeee
Posted by puluque at Wednesday, April 21, 20105comments Links to this post
IPhone knowledge sharing and c2c definition
dateSun, Apr 4, 2010 at 1:45 PM
subjectChat with K.Thoms0nn@gmail.com
hide details Apr 4
1:16 PM me: hi good afternoon
k.thoms0nn: hi how r u?
me: fine n u?
1:17 PM where r u chattin from ? cafe?
me: do u remember me?
me: thanks. now u still in ygn ?
1:18 PM k.thoms0nn: sure bro
1:19 PM at cafe
me: no at home
1:20 PM k.thoms0nn: wut u doin?
me: listen thax soe new album and looking iphone new applications
1:21 PM urs is 3gs?
k.thoms0nn: jail break ?
me: 3gs 3.1.2
k.thoms0nn: so u can;t switch off
1:22 PM me: mostly i dont switch off. if wrongly do it, go to nearest computer and jailbreak again
1:23 PM k.thoms0nn: u cn also do it byurslef
me: yes i did myself
k.thoms0nn: just dl that jail break software
wher u live?
1:24 PM me: the first time ...we chat
k.thoms0nn: oh i remember
1:25 PM me: where i stay/live
1:26 PM k.thoms0nn: u keen to c2c?
1:28 PM me: c2c
k.thoms0nn: cam to cam
cam sex i mean
me: i m ugly
1:29 PM k.thoms0nn: no face needed bro
jsut wank n cum
1:30 PM k.thoms0nn: how u think ?
me: i havent make it before
k.thoms0nn: so why u dnt try :P
me: so scare
1:31 PM k.thoms0nn: lol just need to take ut ur dick n wank til u cum :P
1:33 PM thinkin???
k.thoms0nn: ok let me know
if u r ok
1:38 PM k.thoms0nn: hello , sleepin??
1:41 PM me: hi
1:42 PM me: give me ur vzo acc
k.thoms0nn: i was thinkin u were sleepin after thinkin for cam sex :P
1:44 PM me: i called ready u dont ans
1:45 PM k.thoms0nn: coz u r not in my fri list
i need to add u first
tell me ur vzo
1:47 PM coz u r not in my fri list
Posted by puluque at Monday, April 19, 2010 1 comments Links to this post
date Sun, Apr 4, 2010 at 9:38 PM
subject Chat with firstdream2008@gmail.com
8:53 PM firstdream2008: hi how r u ?
8:54 PM me: 28 male
firstdream2008: role ?
me: top only
firstdream2008: stay where in singapore ?
8:55 PM hello?
me: bukit batok
firstdream2008: had any lover ?
me: i dont want lover
8:56 PM firstdream2008: so ,just want partner right ?
i think we chat before right ?
now u remember me..
9:00 PM firstdream2008: hey
can i see u r pic?
9:01 PM pyaw nay tae lay
sar pe pe lah
firstdream2008: pic kyi chin loe ya lar ?
me: my pic
i m so ugly
9:02 PM i dont care u ugly or not ?
me: when u saw my face, u cant sleep well at night
most people comment my photo, so ugly
9:03 PM firstdream2008: it ok
let me see ok?
me: u want to see my photo
9:04 PM http://img11.imageshack.us/img11/1402/10102009486h.jpg
firstdream2008: this is face book ?
firstdream2008: last time u gave mefb but can not see bcoz
9:05 PM me: yes i show only back side
back side also
me: this link is my photo
9:06 PM firstdream2008: not too bad
by the way , how is u r cock size?
me: round 6in
9:07 PM firstdream2008: really ?
so long pop
me: no so big or so small
firstdream2008: but long right ?
9:08 PM me: how should i say? i dont know
i think my cock is not so small and not so thin
firstdream2008: u said that u got 6" right it long pop
me: n not so long
9:09 PM firstdream2008: how about with u ?
me: what u means?
firstdream2008: i mean sex with me
9:10 PM me: if we r ok we can make it
firstdream2008: we can meet an then we can o right ?
ok sa yar lo loe alr ?
9:11 PM me: ok means place and time and situation
r u also studying, i m also working
9:12 PM in my room is not ok, so we should think place
do u know which place ?
9:13 PM firstdream2008: i do not know ?
me: who stay with u?
firstdream2008: my fri
9:14 PM me: in my room, we cant invite people
firstdream2008: if i got place will u ?
9:15 PM me: inn which place
firstdream2008: my room?
me: if ur room is ok, good
firstdream2008: will u come ?
me: inn i will come
firstdream2008: wht time finish u rwork?
9:16 PM me: in weekday i m so tight
over7or 8
firstdream2008: 7pm or 8 pm right /
firstdream2008: kg tar pop dar so lae
9:17 PM me: what
firstdream2008: nigth so teo kg tar pop
firstdream2008: i am not free saturday and sunday
9:18 PM let we meet one day
firstdream2008: u want to meet first ?
me: u saw my photo if u r ok
9:19 PM firstdream2008: i am ok?
but i am fat naw
me: i think ok
can u show ur photo
9:21 PM me: now?
9:22 PM now ok?
me: so small
me: why dont u attach ur photo
9:23 PM firstdream2008: how attach?
me: in gtalk u click send files
9:24 PM firstdream2008: ok?
9:25 PM me: ok
firstdream2008: ok mean?
me: i got it
9:26 PM firstdream2008: so how?
firstdream2008: i am not noice fat
me: who say
9:27 PM i dont think so
9:28 PM so want to sex with me right ?
9:29 PM but give me time bec now in my site,, i m tight of schedule
so i m so free
firstdream2008: ok next sunday
me: i think it is ok
9:30 PM sunday i m free
firstdream2008: night naw ?
u stay in bishan
firstdream2008: but monday u go work right ?
firstdream2008: r u ok right ?
me: so u mean i will sleep the whole night with u
9:31 PM firstdream2008: not like that ?
me: innn ok par
firstdream2008: u tired nay mar pop that why par
9:32 PM me: i think it is ok
i will go work next morning
from ur home
firstdream2008: i don ,t know
me: ok par can discuss next time
9:33 PM i will call myanmar to my parents
so see u again
9:34 PM firstdream2008: bar ko forget me not lae?
me: nga ko ma met par net
firstdream2008: ma may par woo
u ph number ?
9:35 PM me: 84846590
what is ur no?
second is correct num
me: ur name?
firstdream2008: kyaw zin htike
9:36 PM me: i m htoon htoon
firstdream2008: tun tun or
me: same pronounce
9:37 PM but i dont like tun tun spelling
i will off now
firstdream2008: if u want to talk me ,u can bro
9:38 PM firstdream2008: i mean can call my ph
me: i will call later bec now i will call my parents
firstdream2008: khu call loe ma pyaw woo
Posted by puluque at Monday, April 19, 20102comments Links to this post
date Sun, Mar 21, 2010 at 1:16 PM
subject Chat with k.thoms0nn@gmail.com
hide details Mar 21
12:34 PM k.thoms0nn: hi
4 the add
me: yeh welcome
k.thoms0nn: asl pls
12:35 PM me: age 28 height 5ft 9in
role top only
k.thoms0nn: 27 5'8" top too
12:36 PM me: inn
k.thoms0nn: at home
12:37 PM me: i mean where u stay
12:39 PM me: me 3
its that ur pic onthat forum ?
12:40 PM me: how do u think?
k.thoms0nn: i dnt no
me: tell me ur thinking
12:41 PM k.thoms0nn: 50-50
coz the person in that pic look younger than ur age
me: sure this isnt mine
12:42 PM k.thoms0nn: so ur height , weight
12:44 PM me: height 5ft 9in
66x2.2= ??? lb
k.thoms0nn: quite thin i think
me: not so thin par
12:45 PM at cafe>>
k.thoms0nn: i c
me: ur at home lah
12:46 PM k.thoms0nn: on my bed
can u show ur photo?
k.thoms0nn: i aint look gud
12:47 PM me: sorry what u mean
12:48 PM k.thoms0nn: i mean i'm ugly
me: no problem let me see ur photo
u dnt even postapic
12:51 PM me: i m also so ugly
so i attract other by nice pic
k.thoms0nn: so skip that topic then :P
12:52 PM k.thoms0nn: got attached?
12:53 PM me: inn
dont have bf lah?
12:57 PM me: what r u doing now
k.thoms0nn: nth bro
me: i m watching movie
12:58 PM k.thoms0nn: maybwank later :PP
12:59 PM wut movie?
me: hah ha
watched at mhs movies
1:00 PM k.thoms0nn: i c
me: but very slow connection
1:01 PM k.thoms0nn: when was the last time u have sex
me: last month
do u have sex with gf
1:02 PM k.thoms0nn: sure
me: which one u like more with gf or bf
1:03 PM k.thoms0nn: body contact wit guys
i'm not that into anal
1:04 PM k.thoms0nn: u?
me: i like all
me: different taste
but i'm sacre to ge brown stick
1:05 PM get*
me: i dont get what is?
1:06 PM k.thoms0nn: brown stick means when u do anal if ur partner not clean , got shit on ur dick , we called brown stick
must be use comdom
1:07 PM k.thoms0nn: sure still
it kills my mood
but my experience, some have brown stick but some dont have
k.thoms0nn: yh i no
1:08 PM me: what race r u?
1:09 PM k.thoms0nn: mixed
me: mixed means chinese burmese ?
k.thoms0nn: thai, burmese, chinese
1:10 PM k.thoms0nn: u?
me: now r u in thailand or in myanmar
k.thoms0nn: in ygn for holiday
1:11 PM u??
me: haveanice holiday
no my pa is rakhine and my mom is burma
1:12 PM me: have u been to 369 club
i dnt like clubbin
me: just ask only
1:13 PM k.thoms0nn: any speical event?
me: i arrived last2month ago, just normal
1:14 PM k.thoms0nn: i c
me: i wanna to visit to thailand
1:15 PM oneday i will go there
i m very interested in thailand
k.thoms0nn: gud actually i dnt live there
1:16 PM me: inn
1:17 PM r u study there
k.thoms0nn: workin now
me: what is ur professional
1:18 PM me: it mean so wide? which field ? programmer or web designer??? so on
i asked many question
Posted by puluque at Monday, April 19, 20104comments Links to this post